ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्तो काम « Online Sajha
१२साउन,काठमाडौँ । पेटमा प्रकृतिले नै एसिड ९अम्ल० उत्पादन गराउँछ। हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा पचाउने काम यही एसिडले गर्छ। यो एसिड निस्किएपछि यसबाट बच्न शरीरमा आफ्नै ‘मेकानिजम’ हुन्छ।
कुनै कारणबस यो मेकानिजममा ह्रास आयो भने ग्याष्ट्रिक हुन्छ। ग्याष्ट्रिक हुँदा पेट पोल्ने, दुख्ने, ढ्याउ(ढ्याउ आउनेदेखि लिएर बढ्दै गएमा अल्सरसम्म हुन्छ । अल्सर बिग्रिँदै गएर रगत नै वान्ता हुनेसम्म हुन्छ । मानसिक तनाव धेरै हुनुका साथै चिया, कफी, चुरोट र रक्सीले पनि एसिड उत्पादन बढाउँछ। जथाभावी दुखाई कम गर्ने औषधि र पिरो खानेलाई ग्यास्ट्रिकले सताउँछ।
ग्यास्ट्रिक हुँदा के खाने, के नखाने रु
धेरै तिर्खा लाग्नु रोगको सङ्केत !
यी हुन् समयमा मिठो निन्द्रा नलाग्नुको कारण !
सुगर लेभल बढेमा तुरुन्तै नियन्त्रण गर्ने यस्ता छन् उपाय
बालबालिकालाई ‘भिटामिन ए’ र ‘जुकाको औषधि’ खुवाइँदै
अत्याधिक मात्रामा चिनीको प्रगोगले निम्त्याउने खतरा